Te-hitsahatra ve ianao? Semalt Expert mamaritra soso-kevitra momba ny fomba hisakanana ny spam filters
Raha ny momba ny varotra an-tserasera sy ny asa hafa, dia zava-dehibe ny manangona ireo fampahalalana rehetra ilaina alohan'ny hanaovana asa goavana. Ny fanabeazana amin'ny fanafihana cyber dia mety hahasoa ny orinasa iray. Ohatra, ny orinasa dia afaka mahazo fampahalalana momba ny fomba hahafantarana sy hialana amin'ny mailaka mipetaka sy ny votoaty hafa an-tserasera - vacance valcartier village des sports. Ireo teknikam-pahaizana tsotra ireo dia afaka manampy ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy hamonjy an-tapitrisany ny harena voajanahary izay lasa mora kokoa amin'ny fisian'ny fanafihana spam-pahombiazana. Afaka manavotra ny orinasa koa ny fahatsapana fanafihana an-tsokosoko sy ny fanafihana spam izay mahatonga ny orinasa ho very mpamono olon-dratsy.
Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Successor an'ny Semalt , dia manome fampahalalana lehibe momba ny fomba hiatrehana spam.
1. Adiresy mailaka.
Adiresy mailaka dia fampahalalana manokana momba ny fifandraisana. Tokony hijanona tsiambaratelo izany. Raha mikasika ny fampiasana an-tserasera, aza manome ny adiresinao mailaka amin'ny tranonkala iray na ny endrika an-tserasera izay tsy azo iadian-kevitra ny fahagagana sy ny fitokisana. Ny ankamaroan'ny spammers dia mampiasa adiresy mailaka handefa mailaka. Ny fitazonana ny adiresinao dia manakana azy ireo tsy ho ela. Tsy tokony hanokatra koa ny atonta atolotra amin'ny mailaka spam. Mety misy trangan-dry zareo tranainy, izay afaka manana andraikitra marobe amin'ny solosaina.
2. Aza manaiky hiala..
Rehefa manana rohy ny mailaka spam, dia zava-dehibe ny tsy hanoratanao zavatra. Voalohany indrindra, ity dia fahadalana satria tsy nandray anjara tamin'ny famandrihana ianao. Ankoatra izany, manamarina izany ny mpitsikilo fa ny adiresy mailaka ampiasaiko dia mampiasa izany ho fanafihana hafa amin'ny ho avy. Ankoatr'izay, ny rohy ao aminy dia afaka manatanteraka asa ratsy hafa eo amin'ny PC misy manao fahavoazana maro.
3. Tsindrio ny rohy amin'ny tsipika spam.
Ireo rohy ireo dia mety ahitana malware na mety hampihatra ny antso an-tariby amin'ny smartphone. Amin'ny tranga hafa dia manamafy izy amin'ny spammer fa ny adiresy mailaka dia marina. Ity safidy ity dia mamela ilay spammer miaraka amin'ny tanjona mendrika izay afaka mandefa fitaovana maromaro na tsiambaratelo. Ankoatr'izany, ireo rohy ireo dia mety ahitana fitaovana hacking izay afaka manapitra ny navigateur amin'ny solosaina an-tariby, ary mahazo fahazoana mombamomba ny maro.
4. Mampiasà mailaka ho an'ny asa.
Ho an'ireo olona manana tranonkala manokana dia zava-dehibe ny tsy mamoaka ny asa manokana ao aminy. Ity fisorohana ity dia satria ny hackers sy scammers dia manana fitaovana izay afaka mamoaka ny mailaka avy amin'ny tranonkala ary mampiasa azy ireo amin'ny fanafihana spam. Raha mila mampiditra tolotra mailaka ianao dia ilaina ny mampiasa tolotra mailaka maimaim-poana ho an'ity asa ity.
Betsaka ny orinasa sy ny olona lavo amin'ny fanafihana spam manimba. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny spam dia mitaky andrana maro tsy misy dikany, izay mety hahomby amin'ny fitadiavana olona niharan'ny tsy rariny. Vokatr'izany, ny mpiasa sy ny vondron'orinasa samihafa ao amin'ny orinasa iray dia mora amin'ny fanafihana cyber ary koa ireo hacks hafa ataon'ny antoko tsy manana eritreritra. Ny fanabeazana sy ny fahatsiarovan-tena dia afaka mamonjy ny orinasa betsaka, ny loharano, ny lazany ary ny fialantsiny izay mety hiteraka fahavoazana mahomby. Ao anatin'ity toro-lalana ity dia misy fomba maro ahafahanao mahita sy misoroka spam. Avy amin'ireny teknika ireny, afaka mitandrema amin'ireo mailaka ireo ianao, ary mamaly araka ny tokony ho izy raha tsy misy olana goavana.